पूरा नहुने वाचा गर्नुभन्दा नगरेकै बेस - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
साप्ताहिकमा धेरैपछि नायक राजेश हमालका बारेमा पढ्न पाइयो (फ्रन्टपेज : भावनात्मक द्वन्द्वमा राजेश हमाल) । लामो समयसम्म आफ्नो उचाइ कायम राख्न सफल हमालले अब कामको शैली एवं प्रकृति फेर्न आवश्यक छ । उहाँले चलचित्र क्षेत्रमा अरूलाई रोजगारी दिने वातावरण बनाउनेतिर लाग्दा बेस होला ।
पैसाका लागि मानिसहरू कतिसम्म गिर्न सक्छन् (अपराध : व्यवसायी श्रेष्ठको बहुचर्चित अपहरण तथा हत्या) यो समाचार पढेर थाहा भयो । फरार अपराधीहरूलाई समात्न यथासक्य प्रयास गर्नुपर्छ ।
जनताका बीचमा नगए कहाँ जाने त (गजुरियल विश्लेषण : प्रधानमन्त्रीको क्षमायाचना) ? कुन ठाउँ कसरी बोल्नुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सल्लाहकारको भर पर्नेहरूको भरमा देश छोडेर हुँदैन अब ।
खुसी सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन (युवा मन : सानो खुसी ठूलो खुसी) । आफू के मा सन्तुष्ट भइन्छ त्यसमा भर पर्छ ।
नराम्रो केही भएको छैन (गजुरियल विश्लेषण : प्रधानमन्त्रीको क्षमायाचना) । जसले जसरी बुझे, त्यो बुझ्नेले नै जानुन् । कुण्डकुण्ड पानी, मुन्ड मुन्ड बुद्धि ।
पूरा नहुने वाचा गर्नुभन्दा नगरेकै बेस हुन्छ (हाम्रा जनप्रतिनिधि) जनताले औंला ठड्याउने ठाउँ नरहोस् ।
यौन शिक्षा पनि समयको माग हो (यौन जिज्ञासा र समाधान) । विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान दिन यस्ता विषय पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।
सोचे जस्तो हुँदैन कलेज लाइफ (बहस : कस्तो हुन्छ कलेज लाइफ ?) एकातिर अध्ययनको चिन्ता अर्को घर परिवारको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
हाम्रा नीति, निर्माताहरू समयको माग तथा आवश्यकतालाई बुझ्दैनन् (शिक्षा : परिमार्जनको क्रममा पाठ्यक्रममा)
यो सामग्री सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूका लागि उपयोगी छ (साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी : फेसबुकमा कस्तालाई हटाउने, कस्तालाई राख्ने ?) कुनै स्टाटस, तस्बिर, भिडियो अपलोड गर्दा निकै ख्याल गर्नुपर्छ, अन्यथा फन्दामा परिन्छ ।
जिमेलले यो चाहिँ राम्रो काम गरेछ (साइन्स एन्ड टेक्नो : जिमेलले इमेल नपढ्ने) प्रयोगकर्ताहरूलाई सजिलो होस् । इमेलबाट विज्ञापन हटाएर झन्झटमुक्त बनाउनु राम्रो काम हो ।
मलाई रविना टन्डनको अभिनय मनपर्छ (बलिउड गफ : रविनाको बोल्डनेस) उनको अभिनयमा बोल्डनेस छ । लामो समयदेखि उनको अभिनय हेरिरहेका दर्शकले रविनाबाट राम्रो अभिनयको अपेक्षा गरेका छन् ।
गुड फ्राइडे पेज राम्रो लाग्यो । उपत्यका बाहिरका गतिविधिहरू पनि समेट्न सके अझ राम्रो हुने थियो । साप्ताहिकका पाठकहरू देश–विदेशमा छरिएका छन् । सबैलाई स्थान दिनुपर्‍यो ।
पुराना नाटकहरू पुन: एकपटक प्रदर्शन गरे बेस हुने थियो । (रंगमञ्च : ह्याम्लेट) । विदेशी लेखकका नाटकभन्दा नेपाली लेखकका नाटकलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त होला कि ?
आम मानिसको प्रवृत्ति यस्तै छ । अबिरल थापाको लेख रमाइलो लाग्यो (मुक्त आकाश : थरीथरीका फेसबुके ) । स्टाटसका आधारमा मानिसको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ ।
जुन ठाउँमा जुन चिजको सम्भावना छ, त्यसलाई व्यवसायिक ढंगमा अघि बढाउनुपर्छ (बढ्यो क्यानोनिङको क्रेज)